अष्ट्रेलिया तपाईका लागि होइन,आउँदै नआउँनुहोस् ! - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १९ श्रावण २०७३, बुधबार ०२:५६ |
एसएलसी सकाएर प्लस २ पढ्ने अनि अष्ट्रेलिया या जापान जाने । अहिले अधिकांश नेपाली विद्यार्थीहरुको एइम अर्थात लक्ष्य नै यही बनेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार यही दुई मुलुकमा सबैभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी गएका छन् । गत वर्षको ११ महिनामा झण्डै ३२ हजार जना नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन गर्न जान नो अब्जेक्सन लेटर लिएका थिए ।
यसरी जापान र अष्ट्रेलिया आउँन चाहने नेपाली विद्यार्थीहरुको उदेश्य भने फरक फरक हुने गरेका छन् । कोही देखासिकीका कारण,कोही पैसा कमाउँने सपना बोकेर त कोही यी देशहरुको जीवनशैलीबाट लोभिएर आउँने गरेका छन् । साँच्चिकै पढ्नकै लागि आउँन चाहने विद्यार्थीहरु त अत्यन्त न्यून मात्र भेटिन्छ ।
धेरै नेपाली विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरु नेपालमा बसेर जापान अष्ट्रेलियाका बारेमा अनेक सपना देख्छन् । तर यथार्थ त्यस्तो छैन । सपना र यथार्थसँग मेल नखाँदा धेरै विद्यार्थीहरु डिप्रेसनको शिकार बन्ने गरेका छन् । त्यसैले विद्यार्थीहरुकै अनुभवमा जापान या अष्ट्रेलिया किन जाने र नजाने भन्नेबारेमा बूँदागत रुपमा चर्चा गर्न चाहन्छु ।
७. विद्यार्थी भिसामा आए पनि तपाईको अन्तिम लक्ष्य भनेको पीआर पाउँनु हो भने मानसिक रुपमा तयार रहनुहोस्– सबै सोचेको पूरा नहुन सक्छ । किनभने सबै विद्यार्थीहरुले अध्ययन सकिसकेपछि सहजै पीआर भीसा पाएका छैनन् र पाउँदैनन् पनि ।
माथि उल्लेखित कुराहरु त केही उदाहरण मात्र हुन् । यदि यस्ता कुराहरुभन्दा तपाई माथि हुनुहुन्छ भने आउँनुहोस् जापान र अष्ट्रेलियामा तपाईलाई स्वागत छ । यहाँको जीवनशैली,समृद्धि,अवसर,समान्ता,सुरक्षा,विकास र प्रविधिले तपाईलाई अवश्य पनि लोभ्याउँनेछ । आफैंले कर्म गरेर,परिश्रम गरेर बाँच्न यही मुलुकले सिकाउँनेछ । अनि बल्ल आफ्नै खुट्टामा उभिएर दुनियाँ हेर्नुको मज्जा चाख्न पाउँनुहुनेछ ।
Previousएमालेले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नउठाउँनुका चार कारण
Nextभारतको मुम्बई–गोवा जोड्ने पुल भत्कदाँ दुई बस नदीमा खसेर बेपत्ता
२७ श्रावण २०७६, सोमबार ११:५०
अँग्रेजी भाषा कमजोर हुनेलाई पनि अष्ट्रेलियाको पीआर भिसा
२८ पुष २०७५, शनिबार १५:४६